खगेन्द्र संग्रौला भन्छन् 'फ्यानहरूको विरोध शीलीमा रविकै पत्रकारिता शैली झल्क्यो' - Nepal Path
साहित्यकार तथा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले रवि लामिछाने समर्थकहरुलाई शालिकराम माथिको अन्यायबारे किन यति साह्रो मौन ?भनेर प्रश्न गरेका छन् । सालिकराम मृत्यु प्रकरण, त्यसबाट सिर्जित परिस्थिती तथा पत्रकार रवि लामिछानेको पक्राउपछि यस बिषयको बहसले आमरुपमा चर्चा पाएको छ । यस बिषयमा नेपालका प्रगतिशील साहित्यकार तथा लेखक संग्रौलाले पनि शालिकराम माथिको अन्यायबारे खुलेर बोलेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा यस्तो लेखेका छन् ।
रवि लामिछाने आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न जीवित छन्,शालिकराम पुडासैनी सदाका लागि मारिए ? रविको जयजयकार गर्ने फ्यानहरू शालिकराममाथिको अन्यायबारे किन यति साह्रो मौनरु रविका फ्यानहरूको विरोधको शीलीमा रविकै पत्रकारिताको शैली झल्क्यो भन्छन् ज्ञानीहरू। हैन,कुरो के हो श्रीमान् र?
साउन २० गते चितवनको एक होटलमामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नु पहिला रवि लामिछाने सहित ३ जनाको नाम लिएका थिए । भिडियोमा मृतक पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्याको कारण न्यूज २४ का पत्रकार रवी सहित युवराज कँडेल र एक युवतीमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।
त्यसैको आधारमा प्रहरीले तिनै जनालाई पक्राउ गरि अहिले अनुसंधान गरिहरेको छ । तर रविको पक्राउ तथा सालिकरामको मृत्यु प्रकरणले यति बेला ठुलो बहस जन्माएको छ । रवि समर्थकहरुले फसाउन खोजेको दावी गरिरहेका छन् भने अर्कोथरिले सालिकरामले न्याय पाउनु पर्ने तथा भिडियोमा भनिएजस्तै भएको पनि हुन सक्ने आशंका गरिरहेका छन् ।